Etazonia, Singaporo: Vady amidy amin’ny imailaka, azo vidiana amin’ny karatra fandoavam-bola Diners Club · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 6:42 GMT
Vakio amin'ny teny Português, македонски, Français, Deutsch, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Nambaran’ny blaogy Human Trafficking an'i Amanda Kloer, izay hitantsika ao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny Change.org, ao Etazonia tamin'ny Zoma 12 jona ny nahazoany fandresena: Momba ny fampielezankevitra izany, mba hisarihana ny orinasana karatra fandoavam-bola Diners Club International mba hanajanona ny hetsika ara-barotra ataony miaraka amin'ny orinasa iray miorina ao Singapaoro izay mivarotra amin'ny alalan'ny imailaka ireo vehivavy vietnamiana mba ho vadiana. Olona mihoatra ny 800 no nanao sonia ny fanangonantsonia mba hanerena ny Diner Club tsy hanamora ny asan'ireo maniry ny hividy vady [amin'ny teny anglisy daholo ireo rohy rehetra].
Ity no fanambarana hita tao anatin'io fanangonan-tsonia io [amin'ny teny anglisy]:
Ny olombelona tsy tokony hovidiana na hamidy ary indrindra tsy amin'ny karatra fanamorana fandoavam-bola: ”tolotra manokana” na ”famaranana ny tahiry”. Tsy vitan'ny hoe tena voakitiky ny fanondrana olona an-tsokosoko, fa tena aroso hiharan'ny herisetra an-tokantrano, fampijaliana, fanolanana sy fanararaotana ihany koa ireo vady amidy amin'ny imailaka. Raha toa ka mankaloiloy ny fanaovana fanamorana fandoavam-bola mba hividianana olombelona na izany eo amin'ny sehatry ny fitsipi-pitondrantena na eo amin'ny sehatry ny filozofia, efa andalam-pirodanana ireo sakana ara-toekarena manakana ny fividianana vady. Manome fahafahana ireo mpanondrana olombelona amin'ny fahazoana vehivavy amin'ny fampiasàna masonkarena kely kokoa noho ny taloha ity tsy fahampiana sakana ity. Ankehitriny, sokajy ara-toekarena vaovao anà jiolahy izay manana fahafahana hividy sy hanararaotra ireo vehivavy ireo izany.
Tsy fandikàna lalàna ny fandoavam-bola mba hahazoana vady amin'ny imailaka ao Singapaoro, toy ny any amin'ny faritra sasany hafa maneran-tany. Tamin'ity volana ity, namoaka andiana lahatsoratra mikasika ilay orinasa mpanome tolotra “Vietnam Brides International” (Vady Vietnamiana Iraisam-pirenena) ny The Electric New Paper ao Singapaoro, izay ahitana lahatsoratra momba ny fanomezana fahana 167 $ (121 euros) isambolana iarahana miasa amin'ny Diners Club International, sy ny iray hafa koa eo amin'ny sehatry ny finday momba ny vidin'ireo vady arakaraky ny firenena niaviany. Nifampiresaka ihany koa tamin'ny filoha jeneraly lefitra (ny varotra sy fampandehanam-barotra) ao amin'ny Diners Club ao Singapaoro ny mpanao gazety, Crystal Chan, izay nilaza: ” Tsy hanao fitsara ara-moraly amin'ilay toerana ara-barotr'ireo orinasa mpiara-miombonantoka aminay izahay. Ho anay, zava-dehibe ny maha-ara-dalàna ny varotra.”
Taorian'ity fanangonantsonia ity, nanova ny politikany ilay orinasana karatra fandoavam-bola ary nanoratra ity tao anaty taratasy natokana ho an'ny Change.org [amin'ny teny anglisy]:
” Amin'ny anaran'ny Diners Club International, mpikambana ao amin'ny Discover Financial Services, misaotra [anareo] izahay tamin'ny nampahafantaranareo anay ity fifandraisana ara-barotra manokana nampiasàna ny ‘franchisé’ ao amin'ny Diners ity. Efa napetraka ny paikady ofisialy mba hanatsaharana ity fifandraisana [amin'ny Vietnam Brides International] ity.”
Araka izany, mamarana i Amanda Kloer tao amin'ny tranonkala Change.org [amin'ny teny anglisy]:
Milaza zavatra betsaka ity filazana ity satria mampiseho fa tena nampisy fahasamihafana lehibe ianareo rehetra [tamin'ny fihetsehanareo]. Nampahafantatra ny Diners Club International ireo imailaka nalefanareo momba ny fifanarahan'ny iray tamin'ireo ‘franchisés’ ao aminy niaraka tamina sampandraharaha mivarotra vady amin'ny imailaka [amin'ny teny anglisy]. Nahatonga ny fitazonana fiarovana ara-bola ho an'ny vehivavy sasany, lasibatra voalohany amin'ny fanondrana sy herisetra amin'ny alalan'ny indostrian'ny famarotana vady amin'ny imailaka ianareo. Nolavinareo ny hanaiky fa afaka mivarotra sy mamatsy vola ny fividianana vehivavy toy ny entana ny orinasa iraisam-pirenena iray. Anisan'ireo tranga tsy dia matetika ahitana ireo fiovana lehibe noho ny hetsika nataonareo izao ary indrindra ny fahitana fa manova zavatra manerana ny tany ny hetsika ataonareo.
Misaotra anareo nitatitra ity olana ity tamin'ny Diners Club. Isaorana koa ny Diners Club International tamin'ny fandraisana ity fanapahankevitra lehibe ity mba hiarovana ny vehivavy sy tovovavy amin'itony karazana fanararaotana itony. Isika niaraka no nahafahana nahatonga ny fiovana notadiavintsika.
Tamin'ny volana aprily, namoaka lahatsoratra nosoratan’i Alvinology tao Singapaoro ny Global Voices, mikasika ny tatitra nataon'ny fantsona fahitalavitra Al Jazeera momba ireo ”vehivavy alaina ho vady amin'ny imailaka” avy ao Vietnam. Mampiseho tovovavy roa tonga tao Singapaoro mitady fiainam-baovao ity horonantsary ity [amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra].
Manontany tena i Alvinology momba ny antony itadiavan'ny lehilahy sasany hivady amin'ny vehivavy vahiny kanefa feno vehivavy azo raisina ao Singapaoro. Izao no soratany [amin'ny teny anglisy]:
Ao anatin'ilay lahatsary, [hita fa] mety ho voavidy avy hatrany amin'ny vidiny 10 000 dolara Amerikana (7,254,43 euro) ny vady vietnamiana iray. Vao 18 taona ilay tovovavy teo amin'ny ankavanana rehefa namidy tamina Singapaoriàna 35 taona, izay niaraka tamin'ny reniny nankany amina sampandraharaha ho an'ny fanambadiana mba hisafidy ny ho vadiny.
Ny tena manala baraka indrindra ho an'ireo vehivavy ireo dia ny fitsidihana hôpitaly iray tao Singapaoro mba hahazoana taratasy manamarina ny maha virijiny azy mialohan'ny hamarotana azy.
Raha toa ka nanaiky daholo ireo vehivavy vietnamiana sy ireo lehilahy singapaoriàna ireo nandritra ny fanambadiany, mampanontany tena ahy ny hoe mba firy amin'ireny mpivady ireny no tena niaina hasambarana.